The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 2373716 views
10 facts about jobs in the future by Pew Research Cent... 1078871 views
U Kyaw Win Rev Ph.D (Old Testament) First Myanmar Foreign Bank, First Private Air Line owner
1. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဦးကျေ်ာဝင်း၏ "အောင်မြင်ခြင်းသေ့ာချက်" သက်သေခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) Thursday, 21 February 2013 18:24 မုရန် ဆရာဦးကျေ်ာဝင်းသည် ဘရုားဘနုးတေ်ာထင်ရှားစေသောမြန်မာလမျူုိးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ၁၉၉၀နောက်ပငိုး လူတငိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာဘဏ်စာရင်းဖြင့် နငိုငံခြားငွေ US$ dollar a/c ဖွင့်နငိုသော ပထမဆံုးပဂ္ဂုလိကဘဏ် (မေဖလားဝါးဘဏ်) ဖြစ်သည်။ ရန်ကန်ုတွင် ATM ပထမဆံုးစတင်ခဲ့ပြီး၊ တစ်နငိုငံလံုး ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၃၀၀ကျေ်ာဖွင့်နငိုခဲ့သည်။ ရန်ကန်ုလေကြောင်းဖြင့် ပထမဆံုး လေယာဉ်ပငိုသြူဖစ်ခဲ့သည်။ ။ မြန်မာပြည်အစိးုရသစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင်၊ မြန်မာခရစ်ယာန်လငူယ်များ တတပ်တစ်အား ပါဝင်နငိုရေး စံနမနူာယနူငိုရန် ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတေ်ာချီးမွမ်းခြင်း ဘရုားသခငသ်ည် ကြွယ်ဝသောဘရုားသခင်ဖြစ်ေကြာင်း၊ ဘရုားသခငဟ်ာ ကောင်းကြီးပေးတဲ့ ဘရုာဖြစ်ေကြာင်း၊ ဘရုားသခငဟ်ာ ယခုဘ၀၊ နောငဘ်ဝ၊ ဘ၀နဲ့ စပဆ်ငိုတ့်ဲ ဂတေိတ်ာကိုပေးနေသော ဘရုားဖြစ်ေကြာင်း၊ သက်သေခံဝေငခွှင့်ရတဲ့အတွက် ဘရုားသခငက်ိုအထူးပဲ ကျေးဇူးတငပ်ါတယ်။ ဘရုားသခငရ်ဲ့ အသက်ရငှတ့်ဲ အကြောင်းနဲ့ ကျွန်ေတ့်ာစီးပွားရေး လပုင်န်းများ ဆောငရ်ွက်တဲ့အခါမှာ ဘရုားသခင်မည်ကဲ့သို့ကောင်းကြီးပေး၍ လမ်းပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းများကို သက်သေခံ၊ မဝေငှခင် ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံ ဆုဆောင်းကြပါစို့...။ ဆုတောင်း အဘ ဘရုားသခင၊် ကိုယ်တေ်ာကိုကျေးဇူးတငပ်ါတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ၏ ကျေးဇူးတေ်ာမြတ်သည် ကြီးမားလပှါတယ်။ ကိုယ်တေ်ာရင်ှဘရုားသခငသ်ည် ယနေ၊့ မနေ၊့ နောငက်ာလ မပြောင်းလဲတဲ့ ဘရုား၊ ကိုယ်တေ်ာရငှဘ်ရုားသည် ယခုဘ၀၊ နောငဘ်ဝနငှ့်စပဆ်ငိုတ့်ဲ ဂတေိတ်ာကိုပေးတဲ့ဘရုားသခင်ဖြစ်ေကြာင်းကို ကျွန်ေတ်ာ ကိုယ်တေ်ာ၏ ဘနုးတေ်ာ၊ တနခ်ိးုတေ်ာ၊ နာမတေ်ာသည် ဤမြနမ်ာနငိုင်ံတွင်ထငရ်ှားဖရို့နအ်တွက် ကိုယ်တေ်ာရငှဘ်ရုားသည် ကျွန်ေတ့်ာကို ရွေးကောက် အသံုးပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတငပ်ါတယ်။ သနရ့်ငှ်းသော ၀ိညာဥေ်တ်ာဘရုား လမ်းပြတေ်ာမပူါ။ ယခုဖတ်ရှုတဲ့ ညီအစက်ေိုမာငန်မှ အယောက်တငိုးအတွက်လည်း မမိအသက်တာမှာ တည်ဆောက်စရာဖြစ်ေစတေ်ာမြူပီး လာမည့်နေရ့က် အသက်တာမှာ သူ့တပါးကိုပြနလ်ည်၍ သက်သေသာဓက ထနူငိုသ်ည်အထိယခုဖတ်ရှေုသာ ညီအစက်ိုမောငန်မှ အယေက်တငိုးကိုကောင်းကြီးပေးသနား ပါမည့်အကြောင်း၊ ကိုယ်တေ်ာရငှဘ်ရုား၏ လက်ဝယ်သို့ဆပက်ပအ်ပန်ှံတဲ့အခါ သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာဘရုား၏ နာမကိုအမြှီပု၍ ဆပက်ပအ်ပန်ှံဆေုတာင်းပါ၏အဖ... အာမင်...။ အသက်ရှင်သောဘုရား ဘရုားသခငရ်ဲ့ ကျေးဇူးတေ်ာဘဲ၊ တေ်ာတေ်ာများများက အလပုမ်ျားသလားလို့ကျွန်ေတ့်ာကေိုမးကြပါတယ်။ အမနှတ်ကယ်ပဲ ကျွန်ေတ်ာ အလပုတ်ကယ်များပါတယ်။ အချို့က ကျွန်ေတ့်ာကိုလပုင်န်း ဒေီလာက်တောငလ်ပုေ်နတာ၊ ဦးနှောက်မခြောက်ဘူးလား..လို့ပေးကြပါတယ်။ ကျွန်ေတ့်ာအနေနဲ့ ဦးနှောက်မခြောက်ဘူး၊ ဘာဖြစလ်ို့လဲ ဆေိုတ့ာ ကျ မ်းစာထဲမှာ ပါတဲ့အတငိုးပဲ၊ မမိအမူအရာကိုထာဝရာဘရုား၌ အပန်ံရှန်ဘရုားသခင် စစီဥေ်ပးမယ်ဆိုတဲ့ ဂတေိတ်ာကိုကျွန်ေတ်ာခံယြူပီး အလပုလ်ပုတ့်ဲအခါ ကျွန်ေတ်ာ နည်းနည်းမှဦးနှောက်မခြောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလပုေ်တ့ာများတယ်။ မနက် ၄နာရခွီဲ ထတယ်။ ဘရုားသခငက်ိုဆပက်ပတ်ယ်။ တနေကန်ုဘရုားပေးတဲ့ စီးပွားရေးလပုင်န်းများကိုဆောငရ်ွက်တဲ့အခါ မမိရိဲ့ အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဝငဖ်ို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘရုားသခငရ်ဲ့ ဘနုးတေ်ာ၊ ဘရုားသခငရ်ဲ့ တနခ်ိးုတေ်ာ၊ ဘရုားသခငရ်ဲ့ နာမတေ်ာသည် ဤမြနမ်ာနငိုင်ံမှာ ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်နဲ့ သက်သေပြနိုင်ဖို့ရန် အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောတာထက်၊ ပြောတာထက်၊ ကိုယ်တငိုသက်သေပြနငီုဖ်ရို့န်အတွက် ဘရုားသခင်ကျွန်ေတ့်ာကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက် ဘရုားသခငရ်ဲ့ ကျေးဇူးတေ်ာကိုအထူးပဲ ချီးမွမ်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပငပ်န်းတယ်ရယ်လို့မရပှိါဘူး။ မနက်စောစောထတယ်။ ညမိးုချုပ်ေတ့ာ အပိယ်ာဝငတ်ယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ ခရီးထွက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ခရီးထွက်တယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေကိုလည်း ဘတ်စ်ကားစီးသလို၊ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်နဲ့ တစ်လမှာ အကြိမ်ကြိမ် သွားလာရပါတယ်။ သေို့သ်ာလည်း ဘရုားသခင်ခွနအ်ားပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဘရုားသခငဟ်ာ တကယ်အသက်ရငှတ့်ဲ ဘရုားဖြစ်ေကြာင်း၊ ဘရုားသခငဟ်ာ ဒေီန့ ယြုံကည်သမျူားကိုပေးထားတဲ့ ဂတေိတ်ာဟာ နှုတ်ကပတ်တရားမှာ ပေးထားတဲ့အတငိုး ကျွန်ေတ်ာခံစားရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မဝေငှခင် ခွန်အားယူဖို့ ကျ မ်းပိုဒ်လေး နည်းနည်းဖေါ်ပြချ င်ပါတယ်။ ခွန်အားယူရန် ကျ မ်းပိုဒ်များ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 1/16
2. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) (၁)သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျ က်ဆီးခြင်းငှ သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျ က်ဆီးခြင်းငှါသာ လာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရံမျု မှက အထူးသဖြင့်အသက်ဖြငြ့်ပည့်စံေုစခြင်းငှါ ၁လာသတည်း။ ယော ၁၀း၁၀ (၂) ကိုယ်ကာယကိုဆံုးမခြင်းသည် များစွာသောအကျုိးကိုမပေးတတ်။ ဘရုားဝတ်၌ မွေလေ့်ျာခြင်းမူကား၊ ယခုဘဝ၊ နောငဘ်ဝနငှ့စ်ပဆ်ငိုေ်သာဂတေိတ်ာကို ရသည်ဖြစ၍်၊ ၉အရာရာ၌အကျုိးကေိုပး တတ်သည် ဟေူသာ စကားသည် သစ္စာစကားဖြစ၏်။ အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ်ေသာစကားလည်းဖြစ၏်။ ၁ တိ၎း ၈-၉ (၃) ငါ၏ဘရုားသခငသ်ည် ဘနုးအာနေုဘ်ာ၌ စံပယ်တေ်ာမေူသာ စည်းစမိရ်ှိသည်အတငိုး၊ သငတ်ို့အလရှိုသမျှတို့ကိုယေရရှုစအ်ားဖြင့် ပြည့်စံေုစတေ်ာမူလမိ့မ်ည်။ ဖိ၎း၁၉ (၄) အဘယ်သမျှူမသေိသာသူကဲ့သြို့ဖစ်ေသ်ာလည်းကျေ်ာစောသောသ၊ူ အသေခံသောသူကဲ့သြို့ဖစ်ေသ်ာလည်း၊ အသက်ရငှေ်သာသ၊ူ ဆံုးမခြင်းကခိုံသောသူကဲ့သြို့ဖစ်ေသ်ာလည်း၊ အသေသတ်ခြင်းနငှ့က်င်းလွတ်သောသ၊ူ ၂ကော ၈း၉ (၅) သူတပါးအားပေးကြလေ့ာ။ ပေးလျ ငှသ်ူတပါးသည် သငတ်ို့အားပေးကြလမိ့မ်ည်။ အမနြှ်ခငရ်ံမျု မှက၊ သပိန်ှက်လျ က်၊ လပှုလ်ျ က်၊ လျှံလျ က် ရြှိခင်းနငှ့် သငတ်ရို့ငခ်ွင၌် ပေးကြလမိ့မ်ည်။ အကြောင်းမူကား၊ အကြငခ်ျ နိ၊် တင်းပမာဏနငှ့်သငတ်ို့သည် သူတပါးအားပေး၏၊ ထပိုမာဏအတငိုး ကိုယ်ခံရကြမည်။ လု ၆း၃၈ (၆) ထာ ဝရဘရုားကိုခိုလံ၍ှု ကောင်းသောအကျ င့က်ိုကျ င့ေ်လ့ာ၊၊ ပြည်တေ်ာ၌ နေ၍ သစ္စာတရားကိကျ က်စားလေ့ာ၊၊ ၄ထာဝရဘရုား၌ မွေလေ့်ျာခြင်း ရှေိလ့ာ၊၊ သြို့ပုလျ င်ှစိတ်နှလံုးအလိုပြည့်စံရုသော အခွင့က်ိုပေးတေ်ာမမူည်၊၊ ကိုယ်အမှုအရာကိုထာဝရဘရုား၌ အပ်ေလ့ာ၊၊ ကိုယ်တေ်ာကိုကိးုစားလေ့ာ၊၊ ဆာ ၃၇း ၃-၅ (၇) လူသည် ဘရုားသခင၏် ဥစ္စာတေ်ာကိုလုယရူမည်လေ့ာ။ သေို့သ်ာလည်း သငတ်ို့သည် ငါဥစ္စာကိုလုယြူကပြ။ီ အကျွန်ပုတ်ို့သည် အဘယ်သို့လုယပူါသနည်းဟုသငတ်ေို့မးလျ ငှ၊် ဆယ်ဘို့တဘို့က၄ိုင်း၊ ပေူဇ်ာသက္ကာတို့က၄ိုင်း လုယြူကပြ။ီ သငတ်ို့သည် ကျ နြိ်ခင်းအမင်္ဂလာကခိုံရကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ပြည်သြူပည်သားအပေါင်းတို့သည် င့ါဥစ္စာကိုလုယြူကပြ။ီ ဆယ်ဘို့တဘရိုှိ့သမျှကိုဘဏ္ဍာတိုက်ထဲသို့သွင်း၍၊ င့ါအမိေ်တ်ာ၌ စားစရာရှေိစခြင်းငှါ၊ ပြုကြလေ့ာ။ ငါသည်မိုဃ်းကောင်းကင်ြပတင်းပေါက်တို့ကဖွိုင့၍် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကနုအ်စငသ်ွန်းလောင်းမည်။ မသွန်းလောင်းမည်ကိုထိုသစိုံ့စုမ်းကြလေ့ာဟုကောင်းကငဗ်ိုလ်ခြေအရငှထ်ာဝရဘရုား မနိေ့်တ်ာမ၏ူ။ မာလခိ၃း၃-၁၀ ဘရုားသခငရ်ဲ့ ကျေးဇူးတေ်ာကိုအထူးဘဲ ချီးမွမ်းပါတယ်။ အခုဖေါ်ပြသွားတဲ့ ကျ မ်းပဒိုေ်တွ ကျွန်ေတ်ာ အငမ်တန်ခွနအ်ားရပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာ ရေှးဦးစွာပေ့ါဗျာ..ဘရုားသခငဟ်ာ အသက်ရငှေ်တ်ာမူတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဘရုားသခငက်ိုမသခိငက် ကျွန်ေတ့်ာအသက်တာ နဲ့ ကျွန်ေတ့်ာ မိဘ အသက်တာ အကြောင်းကို တိုတို တုတ်တုတ်နဲ့ သက်သေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြွယ်ဝသော ဘုရားသခင် အခနု ဖေါ်ပြသွာတဲ့ ကျ မ်းပဒိုေ်တွအရ ကျွန်ေတ်ာတို့ခရစ်ေတ်ာကိုယြုံကည်တဲ့သူ(ခရစယ်န)် တစ်ေယာက်အနေနဲ့ ပြနလ်ည်ပြီးတေ့ာ မမိကိုယ်ကို သေသေချာချာဆန်းဆစ်ြကည့်မယ်ဆရိုင်အငမ်တနက်ိုခွနအ်ားရစရာ ဖြစပ်ါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတေ့ာ ကျွန်ေတ်ာတို့ဒေီန့ ဘယ်နေရာဘဲရောက်ရောက် ခရစယ်ာနအ်ချို့ဟာ ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနငိုမ်နင်းနဲ့ လေတိုက်ရင်ေတာင်လဲတေ့ာမလနိဲု့ အဲဒီလြိုဖစ်ြကတယ်။ အမနှဆ်ရိုင်ခရစ်ေတ်ာနောက်လိုက် ခရစ်ေတ်ာကိုယြုံကည်တဲ့သူဟာ ဒါမျုိးမဟုတ်ရဘူး။ ခရစ်ေတ်ာနောက်လိုက် ခရစ်ေတ်ာကို ယြုံကည်တဲ့သူဟာ ခရစ်ေတ်ာရငှရ်ဲ့ တနခ်ိးုတေ်ာအားဖြင့်ခပသ်မိ်းသောအရာကိုတတ်စွမ်းနငိုတ့်ဲသြူဖစရ်မယ်။ ဒေီန့ ကျွန်ေတ်ာတို့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ရွာမှာ ရောက်သွားတယ်။ မြုမှိာ ရောက်သွားတယ်။ ဆရာရေ..ဒုက္ခေရာက်လိုက်တာ.. ကျွန်ေတ်ာက ဘာဖြစလ်ို့... ဘာလေးပေးပါအံုး ..စသဖြင့်ကျွန်ေတ့ာကေိုပြာကြတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတမို့ှာ အသက်ရငှတ့်ဲ ဘရုားသခင်ရှေိတ်ာမြူပီး အငမ်တနမ်ှာ ချ မ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဘရုားသခငရ်ပှိါရဲသ့ားနဲ့ မမိအသက်တာကိုသတ်ချ ငတ့်ဲစိတ်၊ မမိအသက်တာကိုဆံုးရံှးုချ ငတ့်ဲစိတ်နဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ အသက်ရငှေ်နကြတယ်။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 2/16
3. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဘယ်လောက် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသလဲ။ ကျွန်ေတ်ာအထက်မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ နှုတ်ကပတ်တေ်ာတရားတွေ အားလံုး ပြနလ်ည်ခြုံငြုံပီး ကြည့်တဲ့အခါ .. ဘရုားသခငဟ်ာ ကြွယ်ဝတယ်။ ဘရုားသခငက် ကောင်းကြီးပေးတယ်။ ဘရုားသခငဟ်ာ ယခုဘ၀၊ နောငဘ်ဝကိုပေးပငိုတ့်ဲ ဘရုားဖြစ်ေကြာင်း၊ သခင်ေယရှုခရစ်ေတာဟာ လဇူ့ာတိကိုခံယြူပီးတေ့ာ ဒေီလာကိရောက်လာတဲ့အခါမှာ လေူတွရဲ့ အပြစ်ေတွအတွက် အသေခံတယ်။ လေူတွ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမျှအပြစဒ်စုရိုက်တွေကိုပြုလပုတ့်ဲအခါမှာ အဲဒီအပြစဒ်စုရိုက်တွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက် လက်ဝါးကပတ်ငိုမ်ှာ အသေခံပြီး သူ့အသွေးတေ်ာ သွန်းလောင်းသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပြည့်စုံလဲ။ သရူဲ့ ကယ်တင်ြခင်းဟာ အားလံုးပြည့်ပြည့်စံစုံနဲု့ ဆောငရ်ွက်သွားမယ်။ သေို့သ်ာငြားလဲ ဒေီန့ ကျွန်ေတ်ာတို့ခရစယ်ာန်ညီအစက်ေိုမာငန်မှများ အနေနဲ့ ဒီဘရုားသခင်ေပးတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအပြည့်အ၀ မခံစားရဘူး။ တစပ်ငိုးတစစ်တေ့ာ ခံစားရတယ်။ ဘာခံစားရသလဲ..ဆေိုတ့ာ.. ငါသေရင်ေတ့ာ ငရဲသွားစရာမလေိုတ့ာဘူး... ဆိုတဲ့ အဲဒေီလာက်ပဲ ခံစားနေရတယ်။ တကယ်တန်းကျ တေ့ာ ဘရုားသခင်ေပးတဲ့ ဂတေိတ်ာဟာ ယခုဘ၀၊ နောငဘ်ဝ နဲ့ ဂတေိတ်ာ၊ ယခုဘ၀မှာ နေရငလ်ည်း ထိုက်သင့သ်လောက် ဘရုားသခငထ်ံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရပြီး သမျူားထက် သာကိုသာစေရမယ်။ သေသွားတဲ့အခါ နောငဘ်ဝမှာလည်း ငရဲသို့သွားစရာမလပိဲု ခရစ်ေတ်ာနဲ့အတူကောင်းကငန်ငိုင်ံမှာ စိးုစံရမယ်။ ဒီဂတေိတ်ာ နစှခ်စုလံုး ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာရဲ့ အသက်တာနဲ့ ကျွန်ေတ်ာမိဘတွေရဲ့ အသက်တာမှာလည်း အဲဒီလိုအသက်ရငှေ်တ်ာမူတဲ့ ဘရုားကိုမရခငအ်ချ နိက်လေးမှာ အလွနဆ်င်းရဲနွမ်းပမ်းစွာ အသက်ရငှေ်နခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်ေတ်ာသခိဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာဟာ ရမှ်းပြည်မြောက်ပငိုး ကွတ်ခငို၊် ကွတ်ခငိုက်သွားရင် တာမိုညဲ၊ှ တာမိးုညှဲကသွားရင်..၀ါးတောရွာကိုရောက်မှာဖြစပ်ါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာ အဲဒီဝါတောရွက မနုးဝင်း တငိုးရင်းသား လမျူုိး ဖြစပ်ါတယ်။ မနုးဝင်း တိုင်းရင်းသားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားထဲက အုတ်စုတစ်မျိုး လူနည်းစုဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ဘ၀ ကျွန်ေတ်ာဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပငိုး လွတ်လပ်ေရးရပြီးမှမွေးတယ်ဆေိုတ့ာ ကျွန်ေတ့ာမိဘတွေရဲ ပြောပြချက်အရ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတငိုမ်ီ ကျွန်ေတ့ာမိဘတွေဟာ စစက်ေိုရှာင်ြပီးတေ့ာ တောကြုေိတာင်ြကားတွေမှာ လိုက်နေရပါတယ်။ တောကြုေိတာင်ြကားမှာ ငါးကေိုတွ့တဲ့အခါ၊ ကျွန်ေတ်ာ အတေ်ာလေး သတ်ရတယ်။ ကျွန်ေတ်ာ မွေးခဲ့တဲ့ရွာဟာ ၀ါးတော လေို့ခ်ါတယ်။ အဲဒရွီာဟာ ငါးတွေ အငမ်တနမ်ျားပြားပြီး လေူနအမိေ်ခြ ခြောက်အမိေ်လာက်ပဲ ရပှိါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာရဲ့ မိဘတွေဟာ လယ်လပုစ်ားပါတယ်။ ကျွန်ေတ့ာမှာ ညီအစက်ေိုမာငန်မှ ရစှေ်ယာက်ရပှိါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာက နံပါတ်(၃)ပါ။ ကျွန်ေတ်ာတို့ငယ်စဥက် ကျွန်ေတ်ာတို့မိသားစုဟာ အငမ်တန်ဆင်းရဲပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်ေနမ့ှာ ဖခင်ြကီးက .. ငါတို့ဒီအတငိုးနေလေို့တ့ာ မဖြစဘ်ူး၊ ငါတမိုိ့သားစုဘ၀တိးုတက်အောင်ဘာပဲဖြစ်ြဖစ်မြုမိ့ှာသွားပြီးတေ့ာ အလပုရ်ှာရင်ကောင်းမှာပဲ ဆြိုပီး ကွတ်ခငြိုမို့ကိုရောက်လာပါတယ်။ ကွတ်ခငြိုမို့ကို ရောက်လာတဲ့အခါ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ြပီးကာလ နောက်ပငိုး ဆေိုတ့ာလည်း အလပုရ်ှာမရ ဖြစ်ေနပါတယ်။ အဲဒီလိုအလပုရ်ှာရင်း ယောငလ်ည်လည်နဲ့ သွားလာနေတဲ့အခါ ဖခင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာခြင်း တစ်ေနတေ့ာ အသက်ကြီးပြီး ခေါင်းဖြူနေတဲ့ ဆရာကြီးတစပ်ါးဟာ အကေ်ာဒီယံတီးပြီး ယေရှုအကြောင်းကိုသချီ င်းဆြိုပီး သက်သေခံ ဟောပြောနေပါတယ်။ လေူတွ ရောက်လာပြီး နားထောင်ြကတယ်။ အဲဒီဆရာကြီးက အဲဒီအချ နိတ်ံုးက ဘာဟောသလဲဆေိုတ့ာ ... ငါတို့ဘရုားသခငဟ်ာ မမိေိနထငိုေ်တ်ာမေူသာ ဘနုးစည်းစမိရ်ှေိတ်ာမူတဲ့အကြောင်း၊ ယေရခှုရစ်ေတ်ာအားဖြင့်သငတ်ို့အလရှိုသမျှကိုပြည့်စံေုတ်ာမူလမိ့မ်ယ် ..ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ယေရခှုရစ်ေတ်ာ ဤလောကသို့လဇူာတိကိုခံယြူပီး ကြွလာတဲ့ အကြောင်း၊ လေူလာက လူသားတွေရဲ့ အပြစ်ေတွအတွက် အသေခံခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ...ဟောပြောသက်သေခံနေတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဟာ အဲဒီဘရုားသခငက်ိုယြုံကည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါ ဘရုားသခငက်ိုခေါ်ရင၊် ဘရုားသခငက် http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 3/16
4. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ထူးမယ်.. ဆိုတဲ့အကြောင်း.. ဟောပြောသက်သေခံနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ့ာဖခငက်လည်း အဲဒါကြိုကားတဲ့အခါ လူအများရေမှ့ှာသွားပြီးတေ့ာ ခရစ်ေတ်ာကိုယြုံကည်လက်ခံမယ်..လို့ဝနခ်ံတယ်။ အဲဒီလိုဝနခ်ံတဲ့အခါ ဆရာကြီးက သူ့အသက်တာကိုဘရုားသခငထ်ံ ဆက်ကပဆ်ေုတာင်းပေးတယ်။ ဆရာကြီး ဆက်ကပဆ်ေုတာင်း မပေးခင.်. ဆရာကြီးက ခငဗ်ျား၊ ဘာတွေ ဆေုတာင်းပေးစေလိုသလဲ...လို့မေးတေ့ာ၊ ကျွန်ေတ့ာဖခငဟ်ာ .. သရူဲ့အ့ပြစ်ေတွက၀ိုနခ်ံတယ်။ ပြီးတေ့ာ သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာကိုကယ်တငပ်ငိုရ်ငှအ်နေနဲ့ ကျွန်ေတ်ာ ခေါ်ဖိတ်လက်ခံချ ငပ်ါတယ်။ ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ ကျွန်ေတ့ာမှာ အငမ်တနဆ်င်းရဲပြီး တစရ်က်လပုစ်ာ၊ တစရ်က်မစားလောက်ပါဘူး။ ဒြီမို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါ လပုင်န်းကငိုင်န်း အနေနဲ့ တစခ်ခုေုလာက် လချို ငပ်ါတယ်။ ဘရုားသခငဆ်ီက မျှော်ပါတယ်...လို့.. ကျွန်ေတ့ာဖခငက် ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာကြီးကျွန်ေတ့ာဖခင်ပြောတဲ့အတငိုး ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပေးတယ်။ တောင်းလျ င်ှရမည် ဘရုားသခငရ်ဲ့ ကျေးဇူးတေ်ာကြောင့်အသက်ရငှတ့်ဲ ဘရုားသခငဟ်ာ သရူဲ့ ဂတေိတ်ာကိုဘယ်တေ့ာမှမဖျက်ဘူး။ တောင်းပါ ..တောင်းရငရ်မယ် ဆိုတဲ့ အတငိုး တောင်းတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ့ာဖခငဟ်ာ ဆက်လက်ပြီး အဲဒြီမုမိ့ှာ လိုက်လံ အလပုရ်ှာတဲ့အခါ ယကန္က်းလပုင်န်းရငှတ်စဦ်းနဲ့ သွားတွေ့တယ်။ တွေ့တဲ့အခါ လပုင်န်းရငှက်လည်း ကောင်းပါပြ၊ီ ဒါဆရိုင်ကျွန်ေတ်ာလက်ခံပါမယ်။ ခငဗ်ျားဝငလ်ပုပ်ါ ..ဆေိုတ့ာ ကျွန်ေတ့ာဖခင်ဝငလ်ပုပ်ါတယ်။ ၀ငလ်ပုရ်င်းနဲ့ ကျွန်ေတ့ာဖခငဟ်ာ နှုတ်ကပတ်တေ်ာတရား (ကျ မ်းစာ) သူ့ကိုသွနသ်ငတ့်ဲအတငိုး သေးငယ်တဲ့ အမူအရာမှာ သစ္စာရရှိမယ်။ လပုင်န်းရငှဟ်ာ ကိုယ့်ရဲ့ သခငလ်ပိဲု သဘောထားရမယ် ..ဆေိုတ့ာ ကျွန်ေတ့ာဖခငလ်ည်း ရိးုသားဖြောင့မ်တ်စွာနဲ့ လပုင်န်းလပုပ်ါတယ်။ အဲဒနီစှထ်ဲမှာပဲ အဲဒီလပုင်န်းရငှက် လပုရ်င်း၊လပုရ်င်းနဲ့ စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အခါ သူက ကျွန်ေတ့ာဖခငက်ိုခငဗ်ျားဖက်လပုခ်ျ ငရ်င်ေတ့ာ ဒစီက်ရြုံကီးကိုခငဗ်ျားကိုကျွန်ေတ်ာ အကြွေးနဲပေ့းမှာပဲ။ ခငဗ်ျားလပုပ်ါ။ ခငဗ်ျားလပြုပီး တဖြေဖြေးနဲ့ ကျွန်ေတ့်ာကိုဆပပ်ါ။ အဲဒီအခါ ကျွန်ေတ့်ာဖခငက်လည်း ဘရုားသခင်တစခ်ခုပြငဆ်င်ေပးမှာပဲ။ ဒူးထောက်ပြီးတေ့ာ ဘရုားသခငက်ိုဆေုတာင်းတယ်။ ဒီအကြံအစည်ဟာ ကိုယ်တေ်ာရဲ့ အကြံအစည်လား.. ဘယ်လိုလဲ..ဆိုတာ ကျွန်ေတ်ာနားမလည်ပါဘူး။ လပုင်န်းလပုေ်နရင်းနဲ့ ကောင်းလာပြီဆမှိုလပုင်န်းက စီးပွားရေးကျ လို့ သူက ဒစီက်ရြုံကီးကိုအကြွေးနဲရေ့ာင်းနေတယ်။ ကျွန်ေတ်ာလက်ခံရမလား...လ.ို့.ဘရုားသခငက်ထံ ဆေုတာင်းတယ်။ ဘရုားသခငက်လည်း လက်ခံလိုက်ပါ...လို့ တည့်တည့်လင်းလင်းပဲ ကျွန်ေတ့ာဖခငက်ိုဖေါ်ပြပါတယ်။ ကျွန်ေတ့ာဖခငက် အဲဒစီက်ရုံကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပငိုး တစလ်၊ နစှလ်ကြာတဲ့အခါ ပိတ်စတွေ အရမ်းရောင်းကောင်းတပဲ။ ထုတ်လေို့တာင်မလောက်နငိုေ်တ့ာဘူး။ အဲဒစီက်ရုံတနဖ်ိးုကိုသံနုစှေ်လာက် ပေးချေ ရမဲ့အစား သူဟာ တစန်စှထ်ဲနဲ့ ပေးချေ နငိုခ့်ဲတယ်။ ကျွန်ေတ့်ာဖခငဟ်ာ ယေရခှုရစ်ေတ်ာကိုယြုံကည်လက်ခံပြီးတဲ့အချ နိက်စပြီး အကြွင်းမဲ့ ဘရုားသခငက်ိုယြုံကည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ ညီအစက်ေိုမာငန်မှတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း ဘရုားသခငအ်ကြောင်းကိုသွနသ်ငပ်ါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာဟာ ငယ်ငယ်တံုးက အလွနဆ်င်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အတွက် ကျောင်းကောင်းကောင်း မနေရပါဘူး။ ကျောင်းတက်တဲ့အခါ ဖနိပမ်ပါဘူး။ ကျောက်သငပ်နုးိကုကျောက်တံနဲ့ စာရေးတဲ့အခါ သငူယ်ချ င်းတွေရေးပြီး၊ ပြစခ်ျထားတဲ့ ကျောက်တံ အတိုအထွာလေးကိုကောက်ပြီး ရေးပါတယ်။ အဲဒြီကားထဲမှဖခငက်လည်း ဘရုားသခငက်ိုအားကိးုပြီး လပုင်န်းတွေကို ကြုိးစားလပုက်ငိုေ်နရင်း ကျွန်ေတ်ာတို့မောငန်မှတွေကိုဘရုားသခငအ်ကြောင်း အမြဲသွနသ်ငပ်ါတယ်။ သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာ အကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ကျွန်ေတ်ာက အမြဲတမ်းဆန့က်ျ ငတ်ယ်။ အဲဒီလနိဲု့ ကျွန်ေတ်ာဟာ ကျောင်းပြီးလို့စီးပွားရေးလောကထဲ ၀ငလ်ာပါတယ်။ အဲဒီအချ နိထ်ိဘရုားဆိုတာ ကျွန်ေတ့ာမှာ မရခှိဲ့ပါဘူး။ ယုံလည်း မယြုံကည်ခဲ့ပါဘူး။ ငါလပုရ်င်ငါဖြစမ်ှာပဲ ..ဆိုတဲ့ ခံယချူက်နဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိးုပြီး စီးပွားရေး လပုင်န်းများ ရှာဖွေလပုက်ငိုခ့်ဲပါတယ်။ အဲဒီလို လပုက်ငိုတ့်ဲအခါ ..မအောင်ြမငဘ်ူးလား...ဆေိုတ့ာ.. အောင်ြမငတ်ယ်။ ပိုက်ဆံရတယ်။ စာတနမ်ာနန်တ် ..အဲဒီအချ နိတ်ံုးက ကျွန်ေတ့်ာကိုကျိကျိတက် ချ မ်းသာရတဲ့ အခွင့အ်ရေး၊ ပိုက်ဆံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့.. တစ်ေနတေ့ာ အားလံုးဆံုးရံှးုခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုအချ န်ိကြုံတွေ့လာရတဲ့အချ နိက်ျ တေ့ာ ကျွန်ေတ့ာစိတ်ထဲမှာ ဘာကိုသတရိသလဲ...ဆေိုတ့ာ ရွှေေငွ၊ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ချ မ်းသာချ မ်းသာ၊ ဘရုားသခငမ်ပါတဲ့အခါ ..ဘယ်လောက်ပဲရရှိ..ခဏလေးနဲ့ ပြုတ်ထွက်သွားပါလား...ဆိုတာ နားလည်လာတယ်။ အဲဒီအခါကျ မှဘရုားသခငက်ို ဒူးထောက်ပြီး ဆက်ကပဆ်ေုတာင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ... ကိုယ်တေ်ာဟာ အသက်ရငှတ့်ဲဘရုားသခင်ြဖစတ်ယ်..လို့ကျွန်ေတ်ာရဲ့ ဖခင၊် မခိင်ေတွ ကျွန်ေတ်ာငယ်ငယ်တနုးက ကျွန်ေတ့်ာကိုသွနသ်ငခ့်ဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ေတ်ာမလပုခ်ဲံပါဘူး...။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 4/16
5. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဘုရားသခင်ကို စိန်ခေါ်ပါ ကျွန်ေတ်ာ ကိုယ်တေ်ာကိုတစခ်ပဲု မေးချ ငတ်ယ်။ ယခုကျွန်ေတ်ာကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲကိုတစလ်အတောအတွင်း ကျွန်ေတ့ာကိုအဖြေပေးမယ်ဆရိုင၊် ကိုယ်တေ်ာဟာ အသက်ရငှတ့်ဲ ဘရုားသခင်ြဖစ်ေကြာင်း၊ ကျွန်ေတ်ာလက်ခံပါမယ်။ ကျွန်ေတ်ာကိုယ်တငိုလ်ည်း လိုက်လံပြီးတေ့ာ ကိုယ်တေ့်ာအကြောင်းများကိုဝေငမှယ်။ ဟောကြားမယ်။ သက်သေခံပါမယ်။ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်ေတ်ာပါဝငပ်ါမယ်..လို့ဆက်ကပဆ်ေုတာင်းပါတယ်။ (၁၇)ရက် အတောအတွင်းမှာပဲ ဘရုားသခငဟ်ာ အတိအလင်း ကျွန်ေတ့ာကိုအဖြေပေးပြီး အဲဒီအခက်အခဲ ပြသနာရငဆ်ငိုေ်နရတဲ့ အထဲမှ ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သာသနာစတင်ဆောင်ရွက် အဲဒီအချ နိက်စပြီး သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာဟာ တကယ့် အသက်ရငှတ့်ဲ ဘရုားဖြစ်ေကြာင်း၊ ကျွန်ေတ်ာတောင်းတဲ့အခါ ကျွန်ေတ့ာကိုကူညခီဲ့တယ်။ မစတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျွန်ေတ်ာလိုက်ပြီး နေရာတကာမှာ ဟောကြားခဲ့တယ်။ သက်သေခံတယ်။ ဝေငှတယ်။ ကျွန်ေတ်ာဟာ ရရှိသမျှအားလံုးကိုစွန့လ်ွှတ်ပြီး သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာဟာ အသက်ရငှတ့်ဲဘရုားဖြစ်ေကြာင်း (၁၀)နစှေ်က်ျာလောက် တောကြု၊ိ တောင်ြကား ဖြတ်ကျေ်ာပြီး ဟောကြားခဲတယ်။ သက်သေခံတယ်။ ဝေငခှဲပါတယ်။ ဘာဖြစလ်ို့လဲဆေိုတ့ာ သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာဟာ အသက်ရငှတ့်ဲဘရုားဖြစ်ေကြာင်း၊ကိုလူတကာ..ကျွန်ေတ်ာကဲ့သို့ ခံစားရအောငလ်ို့ဖြစပ်ါတယ်။ အဲဒီလိုကျွန်ေတ်ာလိုက်ပြီး ဝေငှတဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတ့ာမှာရှိတဲ့ အမိက်ေိုရာင်းချလိုက်တယ်။ ကျွန်ေတ့ာမှာရှိတဲ့ကား (နောက်ဆံုးတေ့ာ မောင်းရင်း၊မောင်းရင်းနဲ့ တာယာကတံုးတွေဖြစသ်ွားတယ်၊ မောင်းလမို့ရတေ့ာဘ။ူ။ အခြေလည်းပျက်သွားပါတယ်။ နောက်ဆံုး အမိမ်ှာရှိတဲ့ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ ဆဖိုာတွေကိုကျွန်ေတ်ာ တစခ်ြုပီးတစခ်ုထုတ်ရောင်းတေ့ာ၊ ကျွန်ေတ့ာသမီး ဘာပြောလဲဆေိုတ့ာ ... "အဖေ.. လမျူားယူသွားကနြုပ၊ီ အမိမ်ှာ ဘာမှမရှေိတ့ာဘူး..." တဲ့။ ကျွန်ေတ်ာက ယပူစေလ။ို့ ဘရုားရင်ှကျွန်ေတ်ာတို့ကိုပေးထားခဲ့တယ်။ ဘရုားသခငရ်ဲ့ အမှေုတ်ာမြတ်မှာ ပြနလ်ည်ပါဝငတ်ယ်။ ရရှိသမျှတစခ်မှုမကျ န်ေတ့ာဘူး။ ကားပါ ရောင်းချ ခဲ့တယ်။ အားလံုးရောင်းချ ပြီးတေ့ာမှကျောပိးုအိတ်တစလ်ံုးထမ်းပြီး တစ်ြမုဝိ့င၊် တစ်ြမို့ထွက်နဲ့ တောရွာတွေပါမကျ န၊် သခင်ေယရခှုရစ်ေတ်ာအကြောင်းကိုကျွန်ေတ်ာ လိုက်လံပြီး ဟောကြားခဲ့တယ်။ ဝေငှတယ်။ အဲဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ကျ မ်းစာတွေကို သငယ်ခူဲ့ပါတယ်။ ကျ မ်းစာတစအ်ပုလ်ံုးကိုအစအဆံုး (၇)ကြမိေ်လာက် ကျွန်ေတ်ာဖတ်ပြီး ကျွန်ေတ်ာလေ့လာတဲ့အခါ ကျွန်ေတ်ာအဖြေမနှက်ိုတွေခဲ့ပါတယ်။ ယခင့်ယခငတ်ံုးက ကျွန်ေတ်ာနားမလည်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုကျ မ်းစာထဲမှာ အားလံးအဖြေတွေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဟောကြားရင်းနဲပဲ့ ကျွန်ေတ်ာဟာ ဘာဖြစလ်ာသလဲ...ဆေိုတ့ာ၊ ကျွန်ေတ်ာဟာ ခြေထောက်၂ချောင်းထဲနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး ဟောကြားမယ်ဆရိုင်လဦူးရေသန်းပေါင်း ငါးဆယ် (၁၉၈၅) လောက်ရှိတဲ့ မြနမ်ာနငိုင်ံကိုဘယ်လိုလပြုပီး ဧ၀ံဂေလိတရားရောက်နငိုမ်ှာလဲ၊ အဲဒီအချ နိမ်ှာ ကျွန်ေတ်ာစဥ်းစားတယ်။ ဘရုားသခင်ကျွန်တေ့ာကိုပိုက်ဆံပေးပါ ကိုယ်တေ်ာ..ကျွန်ေတ့်ာကိုပိုက်ဆံပေးပါ။ ကျွန်ေတ်ာကိုပိုက်ဆံပေးရင၊် ကျွန်ေတ်ာမှာရှိတဲ့ ငွေနဲ့ ကျွန်ေတ်ာတစ်ေယာက်တည်း အစား ဘရုားသခငအ်မှေုတ်ာအတွက လေူပါင်း ထောငန်ဲချ့ြီပီးရှိတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်ေတ်ာကူညနီငိုမ်ယ်။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်ေတ့ာမနိ်းမကိုလည်း ပြောပြတယ်။ ဒ.ို့.ဒူးထောက်ဆက်ကပရ်အောင၊် အချ နိတ်န်ြပီလို့..စပြီး ဒူးထောက်ပြီး ဘရုားသခငက်ိုဆက်ကပဆ်ေုတာင်းတယ်။ ဘာကြောင့် ဧ၀ံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသလဲဆေိုတ့ာ သမ္မာကျ မ်းက ကျွန်ေတ်ာဖတ်တဲ့အခါ ယေရခှုရစ်ေတ်ာဘရုား ဒေီလာကကိုကြွရောက်လာပြီး ခငဗ်ျားတို့ ကျွန်ေတ်ာတို့အတွက် အသေခံပြီး၊ ရငြှ်ပနထ်မြောက်တဲ့အခါမှာ သမူနိမ့်ှာတာ ၂ခပဲုရှိတယ်။ (၁) သငတ်ို့အချ င်းချ င်း ချ စပ်ါ။ ဒါပေမဲ့ ခရစယ်ာန်ညီအအစက်ေိုမာငန်မှများ အချ င်းချ င်းမချ စ်ြကဘူး၊ မချ စန်ငိုဘ်ူး။ အမိန်ီးနားချ င်းတောင်အတိုက်အခိုက်တွေ ဖြစ်ြကတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကွနှေ်တ်ာတမို့ှာ အကြီးပွားကြဘူး။ (၂) ခရစ်ေတ်ာဘရုား ထပမ်ှာတဲ့ တစခ်ျက်ကတေ့ာ သငတ်ို့သည် ဝေနေယျ သတ၀္တါ အပေါင်းကိုငါ၏ ဧ၀ံဂေလိတရားကိုဟောကြားပါ..လို့မှာထားတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့မပါဝငခ်ျ င်ြကဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ ရငှေ်ပါလေုပြာသလပိဲု ငါသည် ဧ၀ံဂေလိတရားကိုမဟောရင်အမင်္ဂလာဖြစတ်ယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ ဟာ အဲဒီနှုတ်ကပတ်တေ်ာတရားကိုသိတဲ့အခါ သငတ်ို့သည် ဝေနေယျ သတ၀္တါ အပေါင်းကိုငါ၏ ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောကြားပါ..ဆိုတဲ့အတငိုး၊ ဟောတယ်၊ ပါဝငတ်ယ်။ ကိုယ်တငိုေ်ဟာနငိုရ်င်ဟောတယ်။ ကိုယ်တငိုမ်ဟောနငိုတ့်ဲအခါ ငွေကြေးအားဖြင့ပ်ါဝငတ်ယ်။ ဒေီန့အနေနဲ့ ချ စ်ြခင်းမေတ္တာတရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင်ကျွန်ေတ်ာရနသ်ူကိုအငမ်တနခ်ျ စတ်ယ်။ ကွနှေ်တ့်ာကိုနပှိစ်က်တဲ့သေူတွ၊ ကျွန်ေတ့ာကို တိုက်ခိုက်တဲ့သေူတွအတွက် ကျွန်ေတ်ာ အမြဲတမ်း ဆေုတာင်းပေးပြီး သူတနိုဲ့ မိတ်သဟာရဖွဲ့တယ်။။ ဒါကြောင့လ်ည်း ဘရုားသခငက် ဒီကနေ့အထိ ကျွန်ေတ့်ာကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 5/16
6. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) View Rev. U Kyaw Win Sermon in Youtube (search word, Rev U Kyaw Win) တံမြက်စီးမှာဘရိတ်ရှုး တစ်ေန့ကျ တေ့ာ ရွာကေိုရာက်သွားတယ်။ ရွာသရွူာသားများဟာ စီးပွားရေးတွေလပြုကတာ ထငိုးနဲဒီ့ဘက် ကနုစ်ည်ကူးသန်း စီးပွားရေးလပုတ့်ဲအခါ တံမြက်စပီငက်ိုမြက်လစိုည်းပြိးတေ့ာ ရောင်းကြတယ်။ အဲဒါကိုကျွန်ေတ်ာတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဒြီမက်ဟာ တံမြက်စီးလပြုကတယ်။ တောထဲမှာ သွားခုတ်ပြီး လာရောင်းကြတယ်။ နငိုင်ံခြားမှာ တံမြက်စီးလပြုကတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒြီမက်ဟာ တံမြက်စီး တစခ်ုတည်းတေ့ာ မဖြစန်ငိုဘ်ူး...လို့ကျွန်ေတ်ာစဥ်းစားမိတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဘရုားသခငထ်ံ ကျွန်ေတ်ာဆေုတာင်းတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ... တံမြက်စီး ထက် တနဖ်ိးုရှိတဲ့အရာဖြစ်ေအာင်ကိုယ်တေ့်ာအနေနဲ့ ဖနဆ်င်းထားတာဘဲ၊ ကိုယ်တေ်ာလမ်းဖွင့ေ်ပးသနားတေ်ာမပူါ၊ ဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာမည်း ဒမှီာရောင်းချတဲ့ တံမြက်စီးကိုထငိုးနငိုင်ံမှာရှိတဲ့ ကနုသ်ည်ကြီးတစ်ေယာက်နဲ့ ညနှိငှိုးပြီး ...ကဲ..ကောင်းပါပြခီငဗ်ျာ၊ နငိုင်ံခြားကို ပြို့ကည့်ပါဦး၊ တံမြက်စီး တစခ်ုတည်းတေ့ာ မဖြစန်ငိုပ်ါဘူး..ဆေိုတ့ာ သူက ဂျ ပနက်ပို့လိုက်တယ်။ ဂျ ပနက် သေုတသန စမ်းသပလ်ိုက်တဲ့အခါ မော်တေ်ာကားမှာ သံုးတဲ့ ဘရိတ်ရှးုရဲ့ အဓိက ကနြုကမ်းဖြစ်ေနတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဟဖိုက်ကလေူတွနဲ့ စာချုပခ်ျုပ်ြပီး ကျွန်ေတ်ာ နငိုင်ံခြားကို အကြီးအကျ ယ်တငပ်နို့ငိုခ့်ဲတယ်။ အမနှတ်ကယ်ပြောရမယ်ဆရိုင်ဘရုားသခငလ်မ်းဖွင့ေ်ပးတာ ဖြစပ်ါတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်ေတ်ာတို့မျက်စေိရမှ့ှာ ဘရုားသခငဖ်နဆ်င်းထားတဲ့ တကယ့်တနဖ်ိးုရှိတဲ့ အရာပဲ။ ဘရုားသခငဖ်နဆ်င်းထားတဲ့ ကြွယ်ဝစေတဲ့ လောကကြီးမှာနေစဥ်ကျွန်ေတ်ာတို့က ဖေါ်ထုတ်ဖပိုဲ့၊ မြနမ်ာစကားပံရုပှိါတယ်။ ....မသိသေူက်ျာသွား၊ သိသေူဖ်ါစား.. ။ ဒီကနေ့ ကျွန်ေတ်ာတို့ခရစယ်ာနည်ီအစက်ိုမောငန်မှတွေလည်း စီးပွားရေးဘယ်လိုလပုရ်မယ်။ စက်ရုံဘယ်လိုလပုရ်မလဲ။ မွေးမြူရေးဘယ်လိုလပုရ်မလဲ..ဆိုတာကိုအဲဒီနှုတ်ကပတ်တေ်ာ သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ပါတဲ့အတငိုး ကျွန်ေတ်ာတို့လိုက်နာပြီး ဆောငရ်ွက်သွားမယ်ဆရိုင်ေတ့ာ သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ဘရုားသခင်ေပးထားတဲ့ ဂတိအတငိုး ကျွန်ေတ်ာတို့ ကောင်းကြီးအမနှတ်ကယ် ခံစားရမှာဖြစပ်ါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘရုားသခင်ေပးတဲ့အရာ ရေ၊ွှငွေ ချ မ်းသာနငိုပ်ါတယ်။ မြေကြီးအောက်ကအတုံးလေး တံမြက်စီးရာသြီပီးလို့နောက်ရာသီကျ တေ့ာလည်း ဘရုားသခငဟ်ာ အကောင်းဆံုး စစီဥေ်ပးပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတပို မိသားစုဟာ ဘရုားသခငက်ို ဆက်လက် ဆက်ကပ၊် ဆေုတာင်းတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ... ဒါတငမ်ကသေးပါဘူး။ ကိုယ်တေ်ာဟာ ကြွယ်ဝတဲ့ ဘရုားဖြစပ်ါတယ်။ ကိုယ်တေ်ာအနေနဲ့ စံပါယ်တေ်ာမေူသာ ဘနုးစည်းစမိန်ဲ့တကွ ယေရခှုရစ်ေတ်ာကပိုင်ကျွန်ေတ်ာတို့ကိုပေးပြီးပြပီဲ။ ခရစ်ေတ်ာကိုရရင်ကျ နတ့်ဲအရာအားလံုးကိုလည်း ရမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တေ်ာ..ဆက်ပေးပါ။ ကျွန်ေတ်ာဒမှီာ အများကြီးလပိုါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဇနီးမောငန်ှံ(၂)ယောက်စလံုး ကလေးတွေခေါ်ပြီး ဆေုတာင်းတယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်ေနြ့ကတေ့ာ ဘရုားသခငဟ်ာ အံ့သြစရာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ဆေိုတ့ာ ရွာကလငူယ်လေးတစ်ေယာက် ကျွန်ေတ့်ာဆီရောက်လာပြီး.. ဆရာရေ..ဒီအတံုးကလေးကိုကြည့်ပါဦး..တဲ့။ မြေကြီးထဲကတူးတာ၊ ဒါဘာလဲမသိဘူး။ ဆေးတေ့ာဖြစမ်ှာပဲ လို့သေူပြာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာက ကောင်းပြ၊ီ ဒါဆရိုင်ေတ့ာ ခငဗ်ျား..ကျွန်ေတ့ာကေိုပး၊ ကျွန်ေတ်ာနငိုင်ံခြားပြို့ပီး စမ်းသပလ်ိုက်ပါမယ်။ အဲဒီအတံုးကလေးရတေ့ာ သပိဝ်မ်းသာတယ်။ ဘရုားသခငက်ို ဆက်ကပတ်ယ်။ ကိုယ်တေ်ာ.. ကိုယ်တေ်ာဖနဆ်င်းပေးထားတဲ့ မြေအောက်မှာရှိတဲ့ သယံဇာတ၊ ဒီဟာတွေကိုအလဟသတေ့ာမဟုတ်ဘူး။ လူသားတွေအတွက် အကျုိးဖြစ်ေစတဲ့ အရာဖြစရ်မယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့အားဖြင့်သူ့တပါးအကျုိးရဖှိရို့နအ်တွက် ကိုယ်တေ်ာလမ်းဖွင့ေ်ပးတေ်ာမပူါ..။ ကိုယ်တေ်ာ ..ကျွန်ေတ်ာတို့ငွေရရှေိရးအတွက် ပေးသနားတေ်ာမပူါ..ဆေုတာင်းတယ်။ အဲဒီအတံုးကလေးကိုတဖက်နငိုင်ံ ယူသွားပြီးတေ့ာ စမ်းသပရ်နပ်ို့လိုက်တဲ့အခါ ဟဖိုက်က ဘာပြောသလဲဆေိုတ့ာ ဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ အားဆေးဖြစပ်ါတယ်။ ဘပီအငိုက် ထုတ်တဲ့ ဆေးပြားကြတေ့ာ ဘားပလက် Burplex လေိုခ်ါတယ်။ ဘားပလက်ခေါ်တဲ့ ဆေးတံုးကိုထုတ်နငိုတ့်ဲ တကယ့်လိုအပတ့်ဲ ကနြုကမ်းပဲ။ အဲဒပီစ္စည်း အတေ်ာများများရှိသလား..လို့ကျွန်ေတ်ာ ကျေးရွာကလေူတွကိုမေးလိုက်တဲ့အခါ ခရစယ်ာနည်ီအစက်ိုမောငန်မှတွေက..အမေလေး.. များလွန်းလို့ဆရာရယ်၊ ..ယနူငိုရ်င်ကျွန်ေတ်ာတို့သွားတူးရင် တစ်ေန့ကိုပိသာ သံုး..လေးဆယ်..ငါးဆယ်လောက် ရမယ်။ ဆရာကြိုက်သလောက် ဈေးပဲပေးပါ၊ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာလည်း ပြောလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ကျ တေ့ာ အဲဒါကိုဘန်ေကာက်ပမို့ယ် လပုေ်တ့ာ ဟိုဘက်က ဘာပြောသလဲဆေိုတ့ာ ဒီဟာကိုအစပို့လမို့ရဘူး၊ ခြောက်မရှမယ်။ ဒပီစ္စည်းဟာ မှိုတက်တာ သပြိ်မနတ်ယ်။ ဒီကနေ့ မခြောက်ရင်မနက်ဖန်မှုတက်သွားရော၊ ကျွန်ေတာက စကားလွန်ြပီးပြ၊ီ ရွာသားတွေက သွားတူးကြပြီး ကားကြီး၊ ကားငယ်တွေနဲ့ ကျွန်ေတ့်ာဆီလာပြို့ကတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာလည်း ကျွန်ေတ့ာညီကိုတင်ေရွှကိုနေပူထဲမှာ ဖြန့လ်မှ်းခငိုးလိုက်တယ်။ နေ့လည်တောငမ်ရောက်သေးဘူး.. မှေိုတွ အများကြီးတက်လာတယ်။ ကျွန်ေတ့ာညီကိုမှိုထွက်တဲ့နေရာတွေ ခုတ်လိုက်ပါ..ပြောတေ့ာ ကျွန်ေတ့ာညီက လိုက်ခုတ်တာ .. ရေမှ့ှာခုတ်၊ နောက်မှာမြှိုပနထ်ွက်လာတယ်။ ဟာ.. ဘယ်လြိုဖစတ်ာလဲ၊ ကိုယ်တေ်ာ.. ကိုယ်တေ်ာရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 6/16
7. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ကျွန်ေတ့်ာကေိုပးခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးကိုခြောက်အောင၊် အခြောက်ခံစက် Dryer ရှိတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့တာချီလိတ်ဆိုတာ တောရွာပဲ၊ မီးတောငမ်ှ ကောင်းကောင်းမရတဲ့နေရာ၊ (1989) အခြောက်ခံစက်မရှိဘူး..။ ဒေီလာက်များတဲ့ ဥတွေကို၂၄နာရီအတွင်း အခြောက်ခံစက် ဆောက်ဖို့ဆိုတာ အဆောက်အဦးအကြီးကြေီဆာက်ရမယ်။ လျ ပှစ်စလ်မိုယ်။ ဂတ်စ်Gas လမိုယ် ..စသဖြင့ေ်ပ့ါဗျာ။ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ လမိုယ်။ ကျွန်ေတ်ာဆေုတာင်းတယ်။ မနိ်းမကိုလည်းပြောတယ်..မနိ်းမ... ဒါတေ့ာ ဘရုားသခင်ငါတို့ကိုဘယ်လောက်ထိဇွဲရှိသလဲ၊ သူ့ကိုဘယ်လောက်အထိအားကိးုတယ်ဆိုတာ ငါတို့ကို စမ်းသပ်ြကည့်တာပဲ၊ စိတ်မပျက်နဲ့လို့ဆေုတာင်းကြတယ်။ ဆုတောင်း၍ဥာဏ် ပညာ တစရ်က် ဆေုတာင်းတယ်။ ဘာမှအကြံအစည်ပေါ်မလာဘူး၊ တစည်လံုး မိးုလင်းတဲ့အထိကိုယ်တေ့်ာထံ ဆေုတာင်းပါတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ... ဒပီစ္စည်းတွေကို ကျွန်ေတ်ာတို့၂၄နာရနီဲမ့ှာ ခြောက်အောင်လပုန်ငိုဖ်ို့အခြောက်ခံစက် Dryer တစခ်ုလပုမ်ယ်။ ကိုယ်တေ်ာ .. ကျွန်ေတ့်ာကိုDryer Design ဒဇီငိုးတစခ်ေုပးပါ။ ဘရုားသခငက်ိုဆက်ကပတ်ယ်။ (၇)ရက်တိတ် (၇)ရက်၊ (၇)ည ဆေုတာင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ဘရုားသခငဟ်ာ အခြောက်ခံစက်ဒဇီငိုး (Dryer Design) တစခ်ုကိုဖေါ်ပြပါတယ်။ အဲဒီဒဇီငိုးကိုအုတ်နဲစြီ့ပီး စမ်းသပလ်ိုက်တဲ့အခါ အောင်ြမငသ်ွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ..အဲဒနီယ်မြေမှာ အဲဒေီဆးမြစ်ေတွထွက်လာပြီး ကွနှေ်တ်ာတို့ဟာ (၂၄)နာရီအတွင်း ခြောက်အောင်ြပုလပြုပီး တစဖ်က်နငိုင်ံ..နငိုင်ံခြားအထိတငပ်ေို့ရာင်းချ ပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဘရုားရငှဟ်ာ အံ့သြဘွယ် ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ အကယ်၍ မှုတက်တာနဲ့ ကျွန်ေတ်ာတို့စိတ်ပျက်သွားပြီး ဆက်မလပုေ်တ့ာဘူး ဆရိုင်ဘရုားသခငဘ်ယ်လိုလဲ၊ ပေးတေ့ာပေးပြီးတေ့ာ ..အခုကျ မှဒီလဒိုက္ခေရာက်အောင်ပြုလပုတ်ာပဲ ..ဆြိုပီး ဘရုားသခငက်ိုအပြစတ်ငမ်ှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ .. ဘရုားသခငက်ို ကျွန်ေတ်ာအပြစမ်တငခ့်ဲပါဘူး။ ဘရုားသခငက်ိုဆက်လက်ပြီး ဆေုတာင်းတဲ့အခါမှာ ဘရုားသခငဟ်ာ အသက်ရငှတ့်ဲဘရုား၊ မနေ၊့ ယနေ၊့ နောငက်ာလ မပြောင်းလဲတဲ့ဘရုား၊ ကျွန်ေတ်ာတို့အနားမှာ အမြဲရှိတဲ့ ဘရုားဖြစ်ေကြာင်း သက်သေခံတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်ေတ်ာတရိုဲ့ ဆေုတာင်းသံကိုဘရုားသခင် အဖြေပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ တစပ်ါတ်အတောအတွင်း ဒဇီငိုးရရြှိပီး ဒေီဆးမြစဉ်တွေကိုခြောက်အောင်ြပုလပုတ်ယ်။ ပြီးတဲ့အခါ နငိုင်ံခြားကိုတငပ်ို့တယ်။ အဲဒီအခါ မြောက်များစွာသော ငွေကြေးကိုရရခှိဲ့ပါတယ်။ ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ရွာသရွူာသားတွေ ချ မ်းသာလာခဲ့တယ်။ ရွာသရွူာသားအားလံုး တံမြက်စီအချ နိမ်ှာ တံမြက်စီး၊ ခုတ်သမိ်းပြီး ကျွန်ေတ်ာတို့ကိုပေးတယ်။ တငိုးပြည်အတွက် အကျုိးရခှိဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒြီကားမှာ ဘရုားသခငဟ်ာ ကျွန်ေတ်ာတို့ကိုစာမေးပွဲစစပ်ါတယ်။ ပထမ စာမေးပွဲ၊ ဒုတိယစာမေးပွဲ၊ စစသ်လိုကျွန်ေတ်ာတို့ကိုအမြဲတမ်း အားပေးပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာကလည်း အရာရာမှာ ဘရုားသခငက်ိုသာ ဆက်ကပတ်ယ်။ ဘရုားသခငက်ိုသာ အားကိးုတယ်။ ဒေီန့ ခရစယ်ာန် ညီအစက်ေိုမာငန်မှတွေ ဒုက္ခတစခ်ခြုဖစလ်ာရင်..ဆရာရယ်... လပုပ်ါအနုး... ဟိုဆရာရယ်..လပုပ်ါအနုး.. အသက်ရငှေ်တ်ာမူတဲ့ ဘရုား၊ ရရှိဲသ့ားနဲ့ ဒီဘရုားသခငက်ိုဘာမှမတငိုပ်ငပ်ဲ လေူတွထံ လိုက်ပြီး အခက်အခဲဖြေရငှ်းဖို့လိုက်ရှာတယ်။ ကျွန်ေတ်ာက ..ဒီလမိုလပုရ်ဘူး၊ ကျွန်ေတ့်ာအသက်တာမှာတေ့ာ ဘရုားကိုဆက်ကပရ်င်း ဆေုတာင်းရင်မတတ်နငိုတ့်ဲအရာ မရှိဘူးလို့ကျွန်ေတ်ာ အကြွင်းမဲ့ယြုံကည်တယ်။ အဲဒီအချ နိမ်ှာ ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ အောင်ြမငစ်ွာ အဲဒီလပုင်န်းတွေကိုဆောငရ်ွက်နငိုခ့်ဲပါတယ်။ ဘရုားသခင်.. တစန်စှမ်ှာ (၁၂)လ ရှိတယ်။ ရာသီအလိုက်ပေးပါ...လို့ ဆေုတာင်းတယ်။ တစရ်ာသေီပးပြီးရင်ရွာသရွူာသားတွေက တစရ်ာသီလပြုပီး နောက်ထပက်ျ နတ့်ဲရာသမှီာ မလပုစ်ားခင်ထမင်းငတ်မှာပဲ၊ ရာသီအလိုက်ပေးပါ ဆေိုတ့ာ ..ဘရုားသခငဘ်ယ်လောက် ကောင်းသလဲဆေိုတ့ာ (၃)လတစ်ြကမိ၊် (၃)လတစ်ြကမိ်..တစမ်ျုိးပြီးတစမ်ျုိး ပေးပါတယ်။ ကြိမ်သီးလေးတွေ အဲဒေီဆးမြစတ်ူးတဲ့ ရာသီကနုသ်ွားတဲ့အခါ ကျွန်ေတ်ာတို့ဘရုားသခငဆ်ီကိုဆက်ကပဆ်ေုတာင်းထားတဲ့အတငိုး ဘရုားသခင်ဘာထပ်ေပးသလဲဆေိုတ့ာ၊ ..အငမ်တနအ့်ံသြစရာကောင်းတယ်။ ထငိုးနငိုင်ံ၊ လာအနိုငိုင်ံဟာ ကျွန်ေတ်ာတို့မြနမ်ာနငိုင်ံနဲ့ အမိန်ီးခြင်းနငိုင်ံများဖြစ်ြကပါတယ်။္ပတစ်ေနမ့ှာ လာအနိုငိုင်ံ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 7/16
8. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) နယ်စပမ်ှာရှိတဲ့ ရွာသားတွေက တာချီလိတ်ရောက်လာတဲအခါ အသီးလေးတွေ ပါလာပါတယ်။ ရွာသရွူာသားတွေက အဲဒီအသီးလာပေးတေ့ာ ကျွန်ေတ်ာယူထားလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ေနြ့ကတေ့ာ ထငိုးနငိုင်ံ၊ မဲဆငိုဘရုားကျောင်းမှာ ကျွန်ေတ်ာ ၀တ်ပြုစည်းဝေးတက်တဲ့အခါ နငိုင်ံခြားတရားဟော ဆရာတွေ လာပြီး တရားဟောတာ တွေရ့တယ်။ ဟာ.. အဲဒမှီာ ဘရုားသခင်အသက်ရငှတ့်ဲအကြောင်း စီးပွားရေးလပုင်န်းရငှမ်ျားအနေနဲ့ ဘရုားကို ဆက်ကပ်ြပီး လပုရ်င်အောင်ြမငတ့်ဲအကြောင်း၊ သက်သေခံတာ ကြားရတေ့ာ ကျွန်ေတ်ာသပိအ်ားရတယ်။ သက်သေခံတရားဟောပြီး ၀တ်ပြုစည်းဝေးပြီးတဲ့အခါ ကျွန်ေတ့ာကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်။ သနဲူပ့ါလာတဲ့ အဖွဲတွေ့ကလည်း ကျွန်ေတ့်ာကိုလာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ကျွန်ေတ်ာနဲ့ သနဲူ့ စကားပြောနေရင်း သူက ဒမှီာ ဘာတွေထွက်သလဲမေးတယ်။ ကျွန်ေတ်ာက သတုရ္တှိတယ်။ ဘာရှိတယ်။ ညာရှိတယ် ..စကားစပရ်င်းနဲ့ ဒပီစ္စည်းလဲရှိတယ် လို့သူ့ကိုကျွန်ေတ်ာပြလိုက်တဲ့အခါ ..သူက ...ဟာ.. ဒပီစ္စည်းကိုငါတို့က လာအနိုငိုင်ံမှာ ရှာနေတာ၊ ဗီယက်နမန်ငိုင်ံမှာလည်း ရှာနေတာ ..ခငဗ်ျားတနို့ငိုင်ံမှာရှိလား...တဲ့။ ရှိတယ် .. ရွာသရွူာသားတွေပြောတာတေ့ာ အများကြီးပဲ၊ ကောင်းပါပြ၊ီ ဒါဆရိုင်..ဟောင်ေကာင်းက ကျွန်ေတ်ာတရိုဲ့ ကမ္ပုဏီက လူကိုခငဗ်ျားဆီလွှတ်လိုက်ပါမယ်..လို့ပြောတယ်။ ဟောင်ေကာငက် သရူဲ့ ကမ္ပုဏီကလူရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်ေတ်ာနဲ့ တငိုပ်ငည်နှိငှိုးခဲ့တယ်။ ခငဗ်ျားရွာမှာ သွားမေးကြည့်ပါ။ အဲဒပီစ္စည်းကိုရွာသ၊ူရွာသားတွေကိုဘယ်လေိုရာင်းမလဲ မေးခငိုးတယ်။ ကျွန်ေတ်ာက တစရ်ွာပြီးတစရ်ွာ၊ ခရစယ်ာနည်ီအစက်ိုမောငန်မှတွေရော၊ ပြငပ်ရွာတွေရော သွားပြီးတေ့ာ အဲဒရွီာမှာရှိတဲ့ ရွာသရွူာသားတွေကို အကနုေ်ခ်ါမေးလိုက်တဲ့အခါ ခငဗ်ျားတေို့ပြာတဲ့ သပိမ်ာတယ် ဆိုတဲ့ပစ္စည်း၊ ဒပီစ္စည်းတေ့ာ ကျွန်ေတ်ာတို့လချို ငပ်ါတယ်။ ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ ခငဗ်ျားတို့ ရောင်းမလဲဆေိုတ့ာ ..ရွာသရွူာသားတွေက ဘာပြောသလဲဆေိုတ့ာ... အောငမ်လေး..ဆရာရယ်၊ ဒါ သပိမ်ာလွန်းလို့ဝက်တောငမ်ှမကိုက်နငိုဘ်ူး။ ၀က်တောငမ်စားဖူး။ ဆရာတို့ယရူင်ကျွန်ေတ်ာတို့အလကားကြုံးပေးပါမယ်။ ...အလကားတေ့ာ ဘယ်ဖြစမ်လဲ၊ ရေရှည်ယမှူာမို့လို့ဒရီာသမှီာတေ့ာ ဒိကိုယမှူာဆေိုတ့ာ ရွာသြူကီးနဲ့ ရွာသရွူာသားတွေဟာ အားလံုးတငိုပ်င်ြပီး တပံုး (၁၀/ိ တစဆ်ယ်ကျ ပ)် တဲ့၊ သူတို့က ကီလချို နိမ်ရှိဘူး၊ ပိသာချ နိမ်ျုိးမပေးဘူး၊ ရေနံဆီသံပနုးတစပ်ုံတစဆ်ယ်ကျ ပ်ပြောတာ။ ဟာ.. ဒီလိုဆရိုင်သပိန်ည်းတယ်။ ခငဗ်ျားတမို့ကိုက်ဘူးထငတ်ယ်..လို့ကျွန်ေတ်ာပြောတေ့ာ..သူတို့က ..ဟာ.. ကိုက်တယ်။ တစ်ေန့ကိုတစ်ေယာက် (၁၀)ပံုးလောက်တေ့ာ အသာလေး ကြုံးလရို့တယ်။ ၁၀၀/ိ ရတယ်တဲ့။ (ထေိုခတ်က တစ်ေဒါ်လာ- တစရ်ာကျ ပခ်န့်ဈေးပေါက်သည်)။ ဟာ.. ဒီလေိုတ့ာ မဖြစဘ်ူး။ ကျွန်ေတ်ာပြန်ြပီး တငိုပ်င်ြကည့်တယ်။ ငငိုပ်ငလ်ိုက်တဲ့အခါ ဒီဘက်ကပြောတယ်။ တောင်းတဲ့ဈေးထက် ၃ဆလောက် ပေးလိုက်ပါ..တဲ့။ ကျွန်ေတ်ာက ကောင်းပြ၊ီ ခငဗ်ျားတို့က (၁၀/ိ) တောင်းတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့က (၃၀/ိ) ပေးမယ်ဗျာ..လို့ရောင်းတဲ့လူက (၁၀/ိ) ထဲယူတယ်။ ၀ယ်တဲ့လူက (၃၀/ိ) ပေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ (၃၀/ိ) ပေးတယ်ဆေိုတ့ာ အားလုံးသဘောတူညီကြတယ်။ အားလုံး အဲဒီပစ္စည်းကို တောထဲမှာ သွားပြီး ကြုံးလာကြတယ်။ ကြိမ်ရဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို နငိုင်ံခြားပြနတ်ငပ်ို့တဲ့အခါ သူတေို့တာင်းတဲ့ဈေးထက် ကွနှေ်တ်ာတို့က (၁၀) ပရိုပါတယ်။ နငိုင်ံခြားကနေ ခငဗ်ျားတို့ပစ္စည်းကိုတနရ်ာတန်ေကြးကတေ့ာ ဒေီလာက်ပေးပါမယ် ဆြိုပီးတေ့ာ ပေးပါတယ်။ ဘရုားသခငက် ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းသလဲ ဆေိုတ့ာ အဲဒနီယ်မြေ၊ အဲဒေီဒသမှာ ဘာမှစီးပွားရေးမရှေိသ်ာငြားလည်း သဖူနဆ်င်းထားတေ်ာမူတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတများအားဖြင့်ဘရုားရငှေ်ကာင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာတို့ဟာ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေး၊ မြက်လာတဲ့ ငွေကြေးများကို အနီးအနားတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ယြုံကည်သ၊ူ မယြုံကည်သူဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သမျူားကိုကူညမီစတယ်။ ကျွန်ေတ့်ာအမျုိးသမီးဆရိုင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူကို ကူညမီစဖို့ဆရိုင်လံုးဝမတွန့တ်ိုဘူး။ ကွနှေ်တ်ာက (၁၀၀) ပေးပါဆရိုင်သူက တစ်ေထာင်ေပးပါ။ အဲဒီလမျိုိး အားပေးတယ်။ အဲဒီလမျိုိး ကျွန်ေတ်ာတို့က လိုက်ဖက်ညြီကတဲ့ အခါကြတေ့ာ ရွာသွားရင၊် အကျ င်္ဝီတ်သွားရင်ပြနလ်ာရင်မရှေိတ့ာဘူး၊ ဆင်းရဲတဲ့ အဖိးုအဖွားနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကျွန်ေတ်ာမကြည့်ရက်နငိုဘ်ူး။ အကျ င်္ ချွီတ်ပေးခဲ့တယ်။ ပါသွားတဲ့ ပိုက်ဆံပေးခဲ့ပါတယ်။ သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ဖေါ်ပြတဲ့အတငိုး ဆင်းရဲသားကို စွနြ့်ကဲတဲ့သူဟာ ချ မ်းသာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီဂတေိတ်ာအတငိုး ကျွန်ေတ်ာတို့တကယ်ခံစားရပါတယ်။ ဘရုားသခငဟ်ာ သူ့ကိုအကြွင်းမဲ့ ယြုံကည်ပြီးတေ့ာ အမှေုတ်ာမြတ်မှာ ပါဝငသ်ွားတဲ့အခါ ဘရုားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ် ဆိုတာ ကျွန်ေတ်ာတွေရ့တယ်။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 8/16
9. 9/17/2014 ဦးေ◌ကျာဝ◌်င်◌း၏ "ေ◌အာင်◌မြင်◌ခြင်◌းေ◌သာ့ချက်" သက်ေ◌သခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဒေီန့ မြောက်များစွာသော သေူတွ ကျွန်ေတ့ာဆီလာပြီး အလှေုငွလာတောင်းကြတယ်။ အလှေုငွလာပေးပါ။ ခငဗ်ျားတို့စမီံကနိ်းက ဘီလီယံလောက် သန်းပေါင်း ဘယ်နစှေ်ထာငန်ဲ့ လပုေ်နတာ .. အလှေုငွလာပေးပါ။ ကျွန်ေတ်ာပြောတယ်။ ခငဗ်ျားတို့ဆေုတာင်းပါ။ ကျွန်ေတ်ာပငိုတ့်ဲငွေမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ေတ်ာဟာ ဘရုားသခငရ်ဲ့ ဘဏ္ဍာထနိ်းပဲ၊ ဒေီန့ ဘရုားသခင်ကျွန်ေတ့ာကိုအပန်ှံထားတဲ့ ငွေပဲ။ ဘရုားဆီတောင်းပါ။ ဘရုားဖေါ်ပြလို့တို့ထေိပးရင် ပေးပါမယ်။ အားလုံးပေးမှာပဲ။ အခနု ပြောတဲ့ အကြောင်း ပြနဆ်က်ရရင်အဲဒပီစ္စည်းကိုဟောင်ေကာငတ်ငပ်ို့လိုက်တယ်။ သူတို့လည်း သဘောကျ ကြတယ်။ ကနေဒါအထိတငပ်ရို့တယ်။ ဒေီန့လဲ ဆက်လက်ပြီး သူတို့ထံ တငပ်ေို့နရပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဆက်လပုရ်င်း (၂)နစှ်(၃)နစ်ှဖေါ်စားပြီး၊ ပြည်သူလူထုက အကနုလ်ံုးသေိတ့ာ အကနုလ်ံုး ဖေါ်စားတေ့ာ ကျွန်ေတ်ာမဖေါ်တေ့ာပါဘူး။ အခုတံမြက်စီးပြီးတေ့ာ သံုးနစှေ်လာက်ကြာတေ့ာ ကျွနှေ်တ်ာမဖေါ်တေ့ာဘူး။ သမျူား အားလံုး လပြုကပြီဆေိုတ့ာ ကျွန်ေတ်ာမလပုေ်တ့ာဘူး။ အသီးကလေးနောက်တမျိုး နောက်ထပ်လပုင်န်းလိုတယ်..လို့ဘရုားသခငက်ိုဖေါ်ပြတယ်။ ဘရုားထံမှာ ဆေုတာင်းတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ .. နောက်ထပ်တစမ်ျုိးတေ့ာ ထပ်ေပးပါဦး၊ ကိုယ်တေ်ာကိုဆေုတာင်းတယ်။ ဆေုတာင်းတဲ့အခါ ဘရုားသခငက် ဘယ်လောက်အံ့သြစရာ ကောင်းသလဲဆေိုတ့ာ "အခါ" လမျူုိးတွေဟာ တောရွာမှာ နေတယ်။ တနေ့သောအခါမှာ လူမျိုးအဖွားကြီး ၂ယောက်၊ ၃ယောက်ဟာ အသီးကလေးတစ်မျိုးပါလာပြီး ဈေးမှာ လိုက်ရောင်းတယ်။ စားလို့လည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရသာက စပရ်နှိ်း၊စပရ်နှိ်းဖြစတ်ယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တရပုဘ်ယဆေးမှာပါတဲ့ တရပုန်ငိုင်ံမှာ အငမ်တနန်ာမည်ကြီးတဲ့ တနဘ်ိးုကြီးတဲ့ ဆေးဆိုတာ ကျွန်ေတ်ာသိလိုက်တယ်။ သူတို့ကိုမေးကြည့်တယ်။ ဒပီစ္စည်းတွေက ဘယ်ကရသလဲ၊ ရွာအနီးအနားမှာ သဖူာသာ သဘာဝနဲ့ တအားပေါက်တာဘဲ..တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်ေတ်ာ ရွာကိုသွားပြီးတေ့ာ ရွာသားတွေနဲ့ ဘရုားရခှိးုတယ်။ ယေရခှုရစ်ေတ်ာအကြောင်းကိုသက်သေခံတယ်။ သူတနိုဲ့ မိတ်သဟာရဖွဲ့တယ်။ သူတို့ကိုလည်း လပုင်န်းပငိုးဆငိုရ်ာရော အားလံုး လမ်းပြပေးပါတယ်။ ခနု ပြောတဲ့ အသီးကိုလည်း ကျွန်ေတ်ာဖော်ထုတ်ပြီးတေ့ာ အခြောက်ပြုလပုတ်ယ်။ တရပုန်ငိုင်ံအထိတငပ်ေို့ရာင်းချတယ်။ ဒီကနေ့ အထ၊ိ အငမ်တနန်ာမည်ကြီးတဲ့ တရပုဘ်ယဆေးမှာ ပါဝငတ့်ဲ ဆေးဖြစပ်ါတယ်။ ဒီလပုင်န်းတွေလပုက်ငိုရ်တာ ပိုက်ဆံမရဘူးလား..ဆေိုတ့ာ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ေတ်ာဘရုားသခငက်ိုပြောတယ်။ ကိုယ်တေ်ာ... ဒေီလာက်နဲမ့ဖြစ်ေသးဘူး။ ကိုယ်တေ်ာရငှဘ်ရုားရဲ့ ဘနုးတေ်ာ၊ တနခ်ိးုတေ်ာ၊ နာမတေ်ာသည် မြနမ်ာနငိုင်ံမှာ ကျွန်ေတ်ာတို့ကိုမြငတ်ာနဲ့တပြုငိထ်ဲ မယြုံကည်သောသမျူား မြင်ြခင်းအားဖြင့်ယြုံကည်လာအောင၊် ယြုံကည်သမျူားမြင်ြခင်းအားဖြင့်ခွနအ်ားရလာအောင်ကျွန်ေတ်ာလူချှ ငပ်ါတယ် ....လို့ ကိုယ်တေ်ာ၊ အဲဒေီလာက်အထိ ကျွန်ေတ်ာတို့ကိုချီးမြှောက်ပါ။ ပြငဆ်င်ေပးပါ။ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေးမနှသ်မျှလည်း ကိုယ်တေ်ာရငှဘ်ရုားရဲ့ အမှေုတ်ာမြတ်မှာ ပါဝငမ့်ဲငွေကြေးပဲလို့.. လင်မယား(၂)ယောက်စလုံး ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါတယ်။ အဲဒီလို ဆုတောင်းရင်းနဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဖော် ထုတ်တယ်။ အဲဒီဒေသမှာလည်း တိးုတက်လာတယ်။ ဖြွံ့ဖုိးလာတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့လည်း ငွေကြေး မြောက်များစွာရလာပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ် ရလာတဲ့ ငွေကြေးထဲမှာ မမိမိသားစရဲူ့ စားဝတ်နေရေး နေထငိုေ်ရးအတွက်လောက်ပဲ ယြူပီး၊ ကျ နတ့်ဲငွေကိုအဲဒေီဒသမှာပဲ ပြနလ်ည်ပါဝငပ်ါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာဆရိုင်အဲဒီအချ နိက် တာချီလိတ်မှာ ကျွနှေ်တ့်ာရဲ့ အမိမ်ဆောက်သေးပါဘူး။ တာချီလိတ် ဘရုားကျောင်း လိုတယ်လို့ကျွန်ေတ်ာမြငတ့်ဲအခါ ကျွန်ေတ်ာတို့သစလ်ပုင်န်းလပုေ်နရင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေး မနှသ်မျှကိုပံေုအာပြီးတေ့ာမှတာချီလိတ် နစြှ်ခင်းဘရုားကျောင်း ဆောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်ေတ့်ာအမ်ိကျွန်ေတ်ာမဆောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ေတ်ာအရငဆ်ံုး ဘရုားကျောင်းဆောက်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့လ်ဲဆေိုတ့ာ ဘရုားသခငရ်ဲ့ နှုတ်ကပတ်တေ်ာတရားမှာ ပါတယ်။ ကျွန်ေတ်ာတို့ဒေီန့ ဘရုားသခငရ်ဲ့ နောက်လိုက်တွေက ဘာဖြစလ်ို့ဆင်းရဲလဲဆေိုတ့ာ ဘရုားသခငရ်ဲ့ အမိေ်တ်ာဟာ စုတ်ပြက်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဒီလေူတွကိုဘရုားသခငက် ဆင်းရဲခငိုးတာ၊ ဒါကြောင့်ဒီလေူတွကိုဘရုားသခငက် ဒုက္ခေရာက်ခငိုးတာ ..တဲ့။ ဟဂ္ဂဲ ကျ မ်းမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ (ဟဂ္ဂဲ၁း၆ သငတ်ို့သည် များစွာသော မျုိးစေ့ ကြိုကဲသေ်ာလည်း အသီးအနံနှည်းပါးရ၏။ စားရသေ်ာလည်း ဝစွာမစားရကြ။ သောက်ရသေ်ာလည်း ဝစွာမသောက် ရကြ။ အဝတ်ကိုဝတ်ရသေ်ာလည်း နွေးစွာမဝတ်ရကြ။ အလပုလ်ပု၍် အခကခိုံရသေ်ာလည်း မလံေုသာအိတ်ထဲမှာ သိုထားရ၏။ You have http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 9/16